Re कारण हामीले प्रलोभनको अनुभव | प्रार्थना अंकहरू
घर ईश्वरीय बैठक Re कारण हामी प्रलोभनको अनुभव गर्छौं
आज हामी reasons कारणहरुमा सिकाईरहेछौं जुन हामी प्रलोभनको अनुभव गर्छौं। मैले एक गोठालोको रूपमा सुनेको एक विवादास्पद प्रश्नहरू किन विश्वासीहरूले सामना गर्नुपर्दछ प्रलोभन? केही व्यक्तिले सोध्नेछन्, सर, यदि मैले पूर्ण सोच राखेर परमेश्वरको सेवा गरिरहेको छु भने, के मेरो जीवन उत्तम र परीक्षाबाट मुक्त हुनु हुँदैन? हाम्रो सेवा वा ईश्वरको स्थानमा प्रलोभन वा परिक्षासँग कुनै सरोकार छैन।
येशू ख्रीष्ट परमेश्वरको पुत्रले उपवास बसेर after० दिन र रात प्रार्थना गर्नुभयो। त्यसपछि शैतानले येशूलाई प्रलोभित तुल्यायो र ऊ मरूभूमिबाट बाहिर उत्रियो। मत्ती:: १-११ त्यसपछि आत्माले येशूलाई उजाडस्थानमा डोर्यायो र शैतानको परीक्षामा पर्‍यो। चालीस दिन र चालीस रात उपवास बसे पछि उहाँ भोकाउनु भएको थियो। परीक्षा गर्ने मानिस येशू कहाँ आयो र भन्यो, “यदि तपाईं परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भने यी ढु stones्गाहरूलाई रोटी बनाऊ।” येशूले जवाफ दिनुभयो, “यस्तो लेखिएको छ, 'मानिस रोटीमा मात्र बाँच्दैन, तर परमेश्वरको मुखबाट निस्कने हरेक वचनमा बाँच्दछ।' मन्दिर उनले भने, “यदि तपाईं परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भने, तल झर्नुहोस्। किनकि यस्तो लेखिएको छ: “'उहाँले आफ्ना दूतहरूलाई आज्ञा दिनुहुनेछ, र तिनीहरूले तपाईंलाई तिनीहरूको हातमा सुम्पिदिनेछन्, त्यसोभए तिमीले खुट्टामा ढु stone्गा हान्न नपरोस्।'” येशूले जवाफ दिनुभयो, 'यस्तो लेखिएको छ:' तिमीले परमप्रभु तिम्रो परमेश्वरको परीक्षा लिनु हुँदैन। '”फेरि, शैतानले उसलाई एउटा एकदम अग्लो पर्वतमा पुर्यायो र उसलाई संसारको सबै राज्यहरू देखाई। उनले भने, “यदि तपाईंले घुँडा टेकेर मलाई दण्डवत् गर्नुभयो भने, यी सब म तपाईंलाई दिनेछु।” येशूले उत्तरमा भन्नुभयो, “ए शैतान मदेखि टाढा बस! किनभने धर्मशास्त्रमा यो लेखिएको छः 'तैंले परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरलाई दण्डवत् गर्नु पर्छ अनि उहाँकै मात्र सेवा गर्नु पर्छ।' ”त्यसपछि शैतानले येशूलाई छोडिदियो। येशू पवित्र आत्माको शक्तिले भर्नुभयो, बाइबलले उहाँ कुनै दोषविहीन व्यक्ति भएको कुरा रेकर्ड गर्नुभयो, तर शैतानले उसलाई प्रलोभनमा पार्‍यो।
यसले केवल सत्यतालाई स्थापित गर्दछ कि हामी प्रलोभनहरूको सामना गर्न सक्दछौं जुनसुकै परमेश्वरसँग हामी घनिष्ठ छौं। परमेश्वरको मित्र कहलाइए तापनि अब्राहम अत्यन्तै प्रलोभनमा परेका थिए। अब्राहमले आफ्नी पत्नी सारासंग परिक्षणका पलहरू पार गरे। परमेश्वरले अब्राहमलाई जातिहरूका पिता बनाउने प्रतिज्ञा गरिरहनुभयो र अझै Abraham० वर्षको उमेरसम्म पनि अब्राहमको कुनै सन्तान भएन। अय्यूब, ईश्वरको सामु धर्मी भए तापनि बाइबलले रेकर्ड गरेको छ कि परमेश्वरले उसलाई अझै शैतानको प्रलोभनमा पर्न दिनुहुन्छ। हाम्रो उत्सुकता हटाइनेछ यदि हामीलाई मात्र हामीले प्रलोभनको कारण किन थाहा हुन्छ भने।
हामीले थाहा पाउनुपर्ने एउटा कुरा यो हो कि प्रत्येक प्रलोभनको लागि, परमेश्वरले बाहिर एक मार्ग प्रदान गर्नुभयो यदि यो हो भने। कुनै प्रलोभनको पुस्तकले तपाईंलाई पराजित गर्यो जस्तो कि मानवमा सामान्य जस्तो बाहेक। तर परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, जो उहाँले तिमीहरूलाई अझ सक्षम हुन सक्नुहुन्न प्रलोभनमा पर्न दिनुहुन्न, तर प्रलोभनको साथ उम्कने बाटो पनि तयार पार्नुहुनेछ, ताकि तपाईंले सहन सक्नुहुनेछ। 1 कोरिन्थी 10: 13 कुनै पनि प्रलोभनले तपाईलाई उछिन्न सकेको छ बाहेक ऊ जस्तो सामान्य छ। तर भगवान is उहाँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ जसले तपाईंलाई आफू भन्दा बाहिरको परीक्षामा पर्न दिनुहुन्न, तर प्रलोभनको साथले उम्कने बाटो पनि बनाउँदछ, ताकि तपाईं सहन सक्नुहुनेछ। यो।
किन परमेश्वरले आफ्ना बच्चाहरूलाई परीक्षामा पर्न दिनुहुन्छ?
प्रलोभनहरू हामीलाई मोल्ड गर्नका लागि परमेश्वरकै कामको हिस्सा हुन्
हामी विश्वासलाई साँच्चिकै बुझ्दैनौं जतिखेर हामी यसलाई आगोमा फ्याँकन्छौं र सूर्यको रूपमा चम्किरहेको हुन्छौं। आज प्राय जसो इसाईहरूले रमाइलो गर्दछन् ती अनुग्रह हुन्। ख्रीष्टलाई धोका दिएपछि प्रेरित पत्रुसलाई यहूदा इस्करियोतलाई अपमान गर्न सजिलो भएको थियो। तथापि, जब पत्रुसले विश्वास गर्ने बेला भएको थियो, उनी पनि असफल भए।
कहिलेकाहिँ परमेश्‍वरले प्रलोभनलाई उहाँमाथिको हाम्रो विश्वासलाई ढाल्न अनुमति दिनुहुन्छ। भगवानले कहिलेकाहिँ आगोको हेज हटाउँदछ, अनुग्रह निकाल्नुहोस् र हामीलाई जीवनको काँडामा खुला खुट्टाले काम गर्न दिनुहोस्। यो हामीलाई हानी गर्नका लागि होइन, तर हामीलाई अझ ठूलो कार्यको लागि सुसज्जित गर्न। अब्राहामको सबैभन्दा ठूलो प्रलोभन बाँझी थियो। उनलाई कस्तो किसिमको मान्छे थाहा पाउन भगवानले उनलाई यति लामो समयसम्म पर्खनुभयो। अब्राहमको विश्वासले उनलाई परमेश्वरको मित्र ठानेको छ।
प्रलोभनहरू कार्यक्रममा भगवान् राख्छन्
परीक्षा र प्रलोभनहरूले परमेश्वरको वास्तविकता र उहाँको शक्तिको सत्यता प्रकट गर्दछ। जब हामी जीवनको आँधीबेहरीमा थियौं, हामी जोडले लड्यौं। कहिलेकाँही, यस्तो लाग्दछ कि हामी एक्लै लडिरहेका छौं किनकि आँधीबेहरीले अन्धो बनाएको छ र अब हामी आँधीबेहरीमा परमेश्वरलाई देख्न सक्दैनौं।
उनकी पत्नी साराको 90 ० वर्षको उमेरमा जन्म भएपछि परमेश्वरले उनको शक्तिहरू अब्राहामको जीवनमा प्रदर्शन गर्नुभयो। प्रलोभनहरूले सर्वशक्तिमान परमेश्वरको शक्तिमा शक्ति प्रकट गर्दछ।
यसले हामीलाई परमेश्वरतिर फर्काउँछ
त्यहाँ कहिलेकाहिँ परमेश्वरले विश्वासीहरूको जीवनमा प्रलोभन र परीक्षाको अनुमति दिनुहुन्छ ताकि ऊ आफ्नो जीवन परमेश्वरमा फर्केर पाउन सक्छ। जब ख्रीष्ट डु the्गामा सुतिरहेका थिए, आँधीबेहरी शुरू भयो र डु cap्गा डुब्न लाग्यो।
प्रेरितहरू त्यसबेला बिर्सेका थिए कि डरको कारण ख्रीष्ट उनीहरूसँग डु .्गामा नै हुनुहुन्थ्यो। उनीहरूले परिस्थितिलाई जोगाउन यथाशक्य प्रयास गरे तर तिनीहरूको उत्तम पर्याप्त देखिदैन। उनीहरूको मृत्युको क्षणमा, तिनीहरूको होश पुनर्स्थापित भयो र तिनीहरूले सम्झना गरे कि ख्रीष्ट उनीहरूसँगै डु .्गामा थिए। तिनीहरूले मदतको लागि ख्रीष्टलाई पुकारे र आँधी शान्त भयो।
जीवनको परीक्षण कहिलेकाँही हामीलाई परमेश्वरतिर फर्कने बाटो पत्ता लगाउन पठाइन्छ।
प्रलोभन अन्य मानिसहरूलाई उपदेश हो
रोजगार जीवन एक व्यावहारिक उदाहरण थियो। पछि उनले सतावटको सामना गरे जसले गर्दा उनका छोरा छोरीहरू मरे र उनको सम्पत्ति गुमाए। व्यावहारिक रूपमा, अय्यूबसँग बाँच्नको लागि केहि थिएन। उनी बिरामी पर्न सक्ने कुनै कारण थिएन किनभने उसले काम गरेको सबै पहिले नै नष्ट भइसकेको थियो।
यद्यपि, परमेश्वरले उनलाई बचाउनुभयो र उपायहरू भन्दा पर उहाँलाई आशिष्। ऊ पहिला भन्दा धनी र बढी सम्पन्न थियो। परमेश्वर एक्लैले सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ भनेर अय्यूबको जीवन उपदेश हो।
हामीलाई धैर्यता सिकाउन
परमेश्वरका प्रतिज्ञाहरू पवित्र छन्। यद्यपि स्वर्ग र पृथ्वी बित्न सक्छ, तर उहाँको कुनै पनि वचन अपूर्ण हुँदैन। यद्यपि, हाम्रो प्रलोभनले हामीलाई परमेश्वरले गर्नुभएको प्रतिज्ञामा ढिलाइ हुन सक्छ।
परमेश्वरले अब्राहमलाई उनलाई धेरै जातिहरूको पिता बनाउने प्रतिज्ञा गर्नुभयो र Abraham ० वर्षको उमेरसम्म पनि अब्राहमको कुनै बच्चा छैन। परमेश्वरले अब्राहमलाई शाब्दिक शिक्षा दिइरहनुभएको थियो कि कसरी परमेश्‍वरको प्रतिज्ञाको प्रतिक्षामा पर्दा असल मनोवृत्ति कायम राख्नुपर्दछ। कहिलेकाँही, परीक्षाहरू र प्रलोभनहरूले हामीलाई धैर्य गर्न सिकाउँछन् र भगवानलाई अगुवाइ लिन दिनुहोस्।
अघिल्लो लेखमाप्रार्थना समुद्री आत्माको बिरूद्ध
अर्को लेखमाभजन १२100 अर्थ पद पद द्वारा
पाँच कारणहरु तपाइँ ईश्वरीय बच्चाहरु लाई उठाउनु पर्छ
येशूको आगमन को लागी तयारी गर्ने ५ तरिका
धर्मशास्त्रीय प्रमाण हो कि परमेश्वरको आत्माले तपाइँलाई नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ
WAEC परीक्षामा सफलताको लागि प्रार्थना पोइन्टहरू
अप्रिल 12, 2021
व्यापार विफलता विरुद्ध प्रार्थना अंक
पाप kjv बारे 50० बाइबल पदहरू